समाचार Archives - Page 88 of 177 - Bagaicha.com
आगामी आर्थिक बर्षदेखि कामकारवाही तीब्र हुन्छ………..
काठमाडौं– नेकपाका सांसदहरुले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने सरकारको कार्यशैलीले जनताप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हुन्। गुठी विधेयक, आइफा अवार्ड र भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफुलमा प्रयोग भएको विषादी परीक्षण नगर्ने...
लागेको आगो १६ घण्टापछि नियन्त्रण………
वीरगन्ज– वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २१ परवानीपुरमा रहेको सुशील वनस्पति घ्यु उद्योगमा शनिबार बिहान भीषण आगलागी भएको छ। बिहान करिब साढे दुई बजेदेखि सुरु भएको आगलागी साँझ करिब ७ बजेतिर नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायव उपरीक्षक अनन्तराम शर्माले बताए। उद्योगमा लागेको आगो निभाउन लागि पाँचवटा वारुण यन्त्रको सहयोग लिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। आगो...
एक्कासी फेरि दिल्लीभक्त हुनुभयो………
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाँस्यास्पद पात्रको रुपमा परिचित रहेको व्यंग्य गरे। रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीजी हाँस्यस्पद पात्र बन्नुभयो। विहान उठ्दा देशभक्ती कुरा गर्नुहुन्छ, अनि बेलुका भयो कि दिल्लीभक्ती गर्नुहुन्छ। उनले ओलीको कार्यशैली चित्तबुझ्दो नभएको टिप्पणी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले विहान भारतबाट आयात गरि...
हजयात्रीको कोटा बढ्यो…………
भैरहवा – नेपालबाट हजका लागि यस वर्ष एक हजार पाँच सय जाने भएका छन्। साउदी सरकारले नेपाललाई दिइएको कोटामा तीन सय जना थप गरेको हो। यसअघि नेपाललाई हजयात्राका लागि एक हजार दुई सय कोटा दिएको थियो। देशभरबाट नयाँ र पुराना गरी यस वर्ष एक हजार ६ सय ३८ जनाले आवेदन दिएका थिए। साउदी सरकारलाई नेपाल हज समितिले पटक–पटक कोटा बढाउन माग गरेपछि यस वर्ष साउदी हज मन्त्रालयले शुक्रबार तीन सयवटा कोटा थप गरेको हो। गृह मन्...
भक्तपुर केन्द्र बनाएर उपत्यकामा भूकम्पको धक्का………..
काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा शनिबार अपराह्न भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार भक्तपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अपराह्न ४ बजेर १५ मिनेटमा धक्का महसुस गरिएको हो। भूकम्पको धक्का ४.६ रेक्टर स्केल रहेको केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले जानकारी दिए। काठमाडौंमा वर्षा भइरहेका बेला भूकम्पको धक्का गएको हो। धक्काले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सर्वसाधारणहरु घरबाहिर निस्किएका थ...
काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। अपराह्न ४ बजेर १५ मिनेटमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो। विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ।...
बजेट सिध्याउने असारे विकासले जनता आजित……..
दाङ - आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने ‘असारे विकास’ को पुरानो प्रचलन तोड्न हरेक वर्ष सरकारी योजना बन्छन्। बजेट सिध्याउनका लागि गरिने यस्ता विकासे गतिविधिमा ‘आर्थिक लाभ’ प्राप्तिको नियत छँदैछ, गुणस्तर पनि कमजोर हुने गर्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले यस आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकासको पुरानो रोग निको पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए तर व्यवहारमा त्यो अनुभूत गर्न पाइएन। दाङको ...
उपसचिवसहित पाँच कर्मचारीलाई बयानमा बोलाइयो………….
काठमाडौं - बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिनेगरी किर्ते कागजात तयार पार्ने तत्कालीन उपसचिव र शाखा अधिकृतसहित पाँचजना कर्मचारीलाई एक साताभित्र उपन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ। ललितानिवासले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा बोलाउँदा नआएपछि आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत उपसचिव र शाखा अधिकृतसहित भूमि...
मुन्धुमविद्हरूको मुन्धुम समीक्षा
२० असार, काठमाडौ । संकलित मुन्धुमको पाण्डुलिपिलाई उत्कृष्ट पुस्तक बनाउन लिम्वु समुदायका लब्ध मुन्धुमविद्हरूमाझ अन्तक्रिर्या सम्पन्न भएको छ । मुन्धुमका स्रोतहरू ४ जना येवा र विज्ञबाट संकलित मुन्धुमको संकलन, लेखन, अनुवाद तथा सम्पादनमा विज्ञ तुम्याहाङहरूबाट परामर्श लिने उद्देश्यले काडमाडौंमा अन्तक्रिर्याको आयोजना भएको हो । देश विदेशमा रहेका याक्थुङ्् लिम्वु समुदायका लागि साझा, सर्बस्वीकार्य र...
बिमाको पैसा पाउन बाबुद्वारा ४ वर्षीया छोरीको निर्मम हत्या………..
रौतहट - बिमाको रकम हात पार्न बाबुले आफ्नै ४ वर्षीया छोरीको हत्या गरेका छन्। रौतहटको नौलापुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ पथराबुधरामका ३९ वर्षीय रामकिशोर यादवले ४ वर्षीया छोरी लक्ष्मी राय यादवको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यादवले छोरीको नाममा गरेको बिमा रकम हात पार्न आफूले हत्या गरेको स्वीकारी बयान प्रहरी सामु दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नविन कार्कीले जानकारी दिए।...
गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाको दुइतिहाइ………….
पोखरा - स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) बिहीबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन्। उनी मनाङ (ख) बाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। सांसद गुरुङसँगै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका कास्की सचिवालय सदस्य पुष्प कार्की पनि नेकपा प्रवेश गरेका छन्। पार्टी प्रवेश गरेका दुवैजनालाई नेकपा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा ...
दुई वर्षमै ५६ प्रतिशतले बढाउँदा चलखेलको आशंका……….
काठमाडौं - सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को लागत ६३ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने भएको छ। भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले यो आयोजनाका लागि दुई वर्षअघि तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। अहिले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको डिपिआरमा लागत बढाएर एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पु-...